एकैदिन ११ सयले घट्यो सुन भाउ, हेर्नुहोस् तोलाको कति पर्छ ? - Himal News Express
एकैदिन ११ सयले घट्यो सुन भाउ, हेर्नुहोस् तोलाको कति पर्छ ?
हिमाल समाचार ५ फाल्गुन २०७७, बुधबार १४:५५ 197 पटक हेरिएको
काठमाडौँ- एकैदिन तोलामा एक हजार एक सय रुपैयाँले भाउ घटेपछि ८९ हजार ८ सय कायम भएको छ । असार ५ गतेपछि पहिलो पटक छापावाल सुनको भाउ ९० हजारभन्दा तल्लो अंक छोएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यसअघि सुनको भाउ हालसम्मकै उच्च प्रतितोलामा १ लाख ३ हजार ५ सयसम्म पुगेको थियो ।
असार ५ गते ८९ हजार ९ सय रुपैयाँमा छापावाल सुनको कारोबार भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजार र कारोबार नहुनु नै सुनको मूल्य घट्ने मुख्य कारण भएको महासंघका महासचिव धर्मसुन्दर बज्राचार्यले बताए ।